Furaha Fahamka Nolosha | Doodwadaag waa Danwadaag.
Furaha Fahamka Nolosha
Ka waran haddaadan lahayn awood doorasho oo run ah ama madax bannaan. Waxaan u dhabba-galay wakhti aan yarayn, xaaladaha go’aan qaadashada iyo wax doorashada. Sida la ogyahay, wax kasta, wanaag iyo xumaan, khayr iyo shar, Janno iyo cadaab, cudur iyo caafimaad- dhammaan waxaas oo dhan waxay ka dhashaan go’aan qaadasho iyo wax kala doorasho.
Gabadha aad guursatay, ama wiilka aad guursatay, Iskuulka aad wax barashada u aaday, waddanka aad ka tirsantahay, ama aad dagan-tahay, xaaladda ganacsiga ee aad samayso, shaqada aad ka shaqayso, guriga aad dagan tahay, waxaas oo dhan waxay ku yimaadeen ama ka horaysa inaad doorato oo aad go’aansato. Waxaan filayaa in arrintaasi tahay wax la’ogyahay oo aysan dhib lahayn in la fahmo.
Su’aashu waxaa weeye, maxaa ku hoggaaminaya marka aad wax kala dooranayso ama aad go’aan qaadanayso?
Waxaa laga-yaabaa inaad tiraahdo- waxaan ku go’aan qaadanayaa Caqligayga, cilmigayga, waayo aragnimadayda, kartidayda iyo wixii la mid ah. Oo maxaa kale oo go’aan lagu qaataa, haddii aan intaas la adeegsan?
Anigu taas ma diidayo. Waa midda muuqata ee la fahmi karo. Haddana waxaan ogaaday, oo si run ah u ogaaday inaysan intaasi ku fillayn ee ay jiraan wax kale oo run ah, oo ka wayn caqligaaga, cilmigaaga iyo waayo aragnimadaada. Taasi waxay kamid tahay, wax yaabaha ugu waynaa, ee aan xusuusto ee noloshayda raad wayn ku sameeyay.
Bal ila arag arrimahaan soosocda:
1. Fircoon, kaligi taliyihii reer Masar ee qoraanka lagu sheegay, wuxuu dili jiray muddo dheer wiilasha reer Banuu’israa’iil. Laakiin maalintii uu Muuse wabiga niil ka soo qaaday, go’aan wuu gaari waayay. (Waa qiso Qur’aanka lagu sheegay)
2. Maalintii danbe, muudo kadib, ayaa Muuse Fircoon u yimid oo ku dhahay, ‘Ma ogtahay, fircoonow inaan ahay Rasuul Alle, oo uu iisoo diray, inaan kuu sheego, inaad Alle caabuddid, Reer Banuu’israa’ilna aad dhibka ka dayso oo aad xorriyaddooda u ogolaato. Fircoon, oo muddo caruurta dhalata ee reer Bunuu’israa’iil laynayay, isaga oo raadinaya Muuse, haddana ma awoodin inuu go’aan gaaro, ee wax kale iyo Suxaro in la isu keeno ayuu ku mashquulay.
3. Marka wax la rumaynayo, waxa ugu wayn ee lagu rumeeyo waa inaad aragto oo aad goob joog u noqoto. Inta badan dadku waxay rumeeyaan wax aysan arkin ee loo sheegay. Kawarran, haddii la tuso oo ay indhahooda ku arkaan Mucjisada Alle, soo ma keenayso inay rumeeyaan. Jawaabtu waa haah. Kawaran, haddii aysan dhicikarin inaad wax rumayso, in laguu fasaxo mooyee; sida macnaha aayaddaan Quraanka ku cad:
“وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ”
“Haddii aan Malaa’igta ku soo dajinno oo ay arkaan, dadkii dhintayna aan u soo kulminno oo ay la hadlaan; wax kasta oo ay sheegtaan ama ay rabaanna la horkeeno, taasi ma keenayso inay Alle rumeeyaan. Rumaynta Alle la rumeeyo, kuma timaado mucjisooyin waawayn oo la arko, ee waxay ku timaadaa in Alle doono oo uu amarka bixiyo” U fiirso, darsigaan mucjisada wata. Xoog iyo xoolo midna kuma xirna sida xaalkaagu noqonayo iyo waxa aad samaynayso, waxay ku xiran-tahay in laguu ogolaado; in Alle kula doono; in Alle ku hanuuniyo. Ma laga yaabo, inaad doorato wax aan Alle kuu doorin. Waa layaab. “انك لاتهدى من أحببت ولكنّ الله يهدى من يشاء”
Intaas aan soo sheegay, waa marka la akhriyo ama la raaco qisooyinka waxyiga lagu sheegay, sida kuwa Qur’aanka lagu sheegay, ee aan soo xusnay. Laakiin, taas kaliya ma aha. Haddii aad u fiirsato, go’aan qaadashada qofka, qowska, qabiilka, dawladda dhammaan waxaad arkaysaa in marna la waafajinayo, oo ay sawaabta arkayaan, marna laga duwayo, oo ay meel fog oo aan waxba jirin ay ku ambanayaan. Haddii aad noloshaada fiiriso, waxaad arkaysaa, wax badan oo aad rabtay, oo kuu dhawaa, haddana aan lagu waafajin, oo lagu daba mariyay; iyo wax badan oo aadan ogayn oo aadan ku talagalin, oo haddana laguu diray, oo laguu fududeeyay. Marka darsigaan, ma aha, kaliya Qisooyin waa hore, la sheegay, ee waa xaqiiqda runta ah, ee hawl maalmeedka caalamku ku socdaan. Allow tawfiiqda na waafaji.
Sheekh Cabdiraxaam M Jabriil